ယခုသင်သည် Chromecast2နှင့် Chromecast Audio | ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ Androidsis
Manuel Ramirez | | NOTICIAS, အခြားကိရိယာများ
မနေ့ကဂူးဂဲလ်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည် အသစ်နှစ်ခု gadgets, Chromecast2နှင့် Chromecast အသံ။ many ည့်ခန်းရှိသည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို TV မျက်နှာပြင်သို့တိုက်ရိုက်လွှင့ ်၍ multimedia အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ရန်အသုံးပြုသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့် dongle သည်ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့်အသစ်ဖြစ်မည့်အကြောင်းရင်းနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
နှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Google Store မှာယူရို ၃၉ ဈေးနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ် Chromecast ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Chromecast 39 ရှိပါတယ် တစ် ဦး မဟုတ်ဘဲစပ်စုဒီဇိုင်း ပုံရိပ်တွေမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ HDMI port တစ်ခု၊ Wi-Fi အတွက်ပိုမိုအထောက်အပံ့ပေးမှုနှင့်အင်တင်နာတွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကြောင့်ဗီဒီယိုတိုးတက်လာခြင်း။ ၎င်းကို Chromecast Audio ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူတွဲဖက်ပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အား၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
2 Chromecast အသံ
တစ်ခုခုသောအခါငါတို့အံ့အားသင့်လျှင် ပထမဆုံးယိုစိမ့်မှု Chromecast အသစ်၏ပထမဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းသည်ပထမနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးနားမလည်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ က USB connector ကိုဖုံးကွယ်သောမြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္.ာန် နောက်ဆုံးမှာတော့မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အမြင်အာရုံစတိုင်နဲ့တွဲဖက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကသူတို့သူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးကိုဒီလိုရှားပါးတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချင်တာသေချာပါတယ်။
Chromecast အသစ် 802.11ac Wi-Fi နဲ့လိုက်ဖက်တယ် 5GHz ကွန်ယက်များနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အချက်ပြဖမ်းယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်သုံးဆလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့်အင်တင်နာဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
သင်၏ဝယ်ယူမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အရောင်များမှာ အနက်ရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အနီ.
Chromecast Audio သည်ငါတို့ကိုခွင့်ပြုသည့် dongle တစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့်စံစပီကာကိုမဆိုချိတ်ဆက်ပါ သင်ကြိုးမဲ့ဂီတဖွင့်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးသင်စပီကာကိုစမတ်ကျစေမည်။ ၎င်းကိုဝယ်ယူရန်နောက်လိုက်များစွာရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းစပီကာများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုအိမ်သုံး Wi-Fi ကွန်ယက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည့်အလွန်ကြီးစွာသောအဆိုပြုလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျအနည်းငယ်စိတ်ကူးနှင့်အတူကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါသည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည် circuit board၊ audio processor၊ Wi-Fi radio နှင့် headphone jack ဖြစ်သည် ဂီတကိုလွှင့်သည် Chromecast Audio ကြောင့်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်ဗီရိုထဲမှထုတ်ယူနိုင်သည့်စပီကာများအတွက်။
ဒီ dongle သည် Chromecast Audio ယူနစ်ပေါင်းများစွာကိုပေါင်းစပ်။ ပင်ဖန်တီးနိုင်သည် အခန်းပေါင်းစုံတည်ဆောက်မှုသို့သော်စျေးကွက်ရှိအခြားရွေးချယ်စရာများထက်ဈေးချိုသည်။
ဒီဇိုင်းsurelyကန်အမှန်နိုင်ပါလိမ့်မည် ဗီနိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုသတိရပါ ၎င်းကို Chromecast အသစ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့် Wi-Fi နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းတွင် optical နှင့် RCA ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။
နှစ်ခုသော့ခလောက်ဖြစ်ကြသည် € 39 ၏စျေးနှုန်းမှာ ဒါကြောင့်သူတို့ကယူနစ်များကုန်ဆုံးမတိုင်မီသင် Google Store ကိုသွားနိုင်သည်။ Google ကဖွင့်ပေးသောကိရိယာများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
ရယူပါ €2အတွက် Chromecast ကို 39/ € 39 အတွက် Chromecast ကိုအသံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Google Store တွင်ယူရို ၃၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သော Chromecast2နှင့် Chromecast Audio ရှိပြီးဖြစ်သည်
နှစ်ခု - ရှိရမည် dongles! သင်အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြိုက်လျှင် ...